श्रीमानले अस्पताल लगेर अप्रे’सन गरि बच्चा जन्माउने आ’धार नि’काल्न ल’गाएर आफ्नो बच्चा न’हुने ब’नाएको , अब म बच्चा जन्माउन स’क्दिन : गायिका सरस्वती लामा – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. श्रीमानले अस्पताल लगेर अप्रे’सन गरि बच्चा जन्माउने आ’धार नि’काल्न ल’गाएर आफ्नो बच्चा न’हुने ब’नाएको , अब म बच्चा जन्माउन स’क्दिन : गायिका सरस्वती लामा – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
चर्चित रक गायिकाको परिचय बनाउँन सफल सरस्वती लामाको स’म्बन्धमा द’रार आएको केही महिना पुरा भएको छ । स्टेज कार्यक्रममा अनेक ह’र्कत ग’रेर चर्चामा आएकी गायिका लामा र उनका श्रीमान धनबहादुर लामाबीच दू’री ब’ढेको छ । ११ वर्ष अघि वैवाहिक जीवनमा बाँ’धिएका उनीहरुबीच अहिले फा’टो आएको हो ।गायिका सरस्वतीले श्रीमान धनबहादुर लामाले ज्या’न नै बाँ’की नरा’ख्ने चेत’वानी दिएको आ’रोप लगाएकी छिन् ।
हालै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले आफ्नो ज्या’न जो’खिममा रहेको भन्दै जीवन र’क्षाका लागी पनि आ’ग्रह गेरेकी छिन् । आफुलाई श्रीमान धनबहादुर लामाले झु’टो आ’रोप लगाएर दु’ख दिइर’हेको आरो’प लगाएकी उनले आफूमाथि लगाएको आ’रोपमा प्रमाणसमेत मागेकी छन् ।
यसअघि उनका श्रीमान धनबहादुर लामाले श्रीमती सरस्वतीले एक करोड ६ लाख ठ’गि गरेको आ’रोप लगाएपछि गायिका सरस्वतीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो आ’रोपको खण्डनसहित प्रमाण दिन चु’नौती दिएकी छिन् । उनले भनिन, ‘एक करोड आम्दानी नै नभएको मान्छेको मैले कसरी एक करोड ठ’ग्न सक्छु ?
विवाह गरेको केहि बर्ष पछि श्रीमान धनबहादुर लामाले अस्पताल लगेर अप्रे’सन गरि बच्चा जन्माउने आधार निकाल्न लगाएर आफ्नो बच्चा नहु’ने बनाएको सरस्वतीको ग’म्भीर आ’रोप छ । ६ बर्ष अघि देखिनै श्रीमान सँगको स’म्बन्ध वि’ग्रिएको बताउँदै उनले आफुले डि’भोर्स मा’गेका कार’ण गलत आ’रोप लगाएर आफुलाई ब’दनाम गरा’उँन खो’जेको बताइन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको December 23, 2020 December 23, 2020 898 Viewed